Ryan Fraser tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Ryan Fraser tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra fantatra amin'ny anaram-bosotra "Wee Man, Ryzi". Ny tantaran-tantarantsika Ryan Fraser momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaran'ny tantaram-piainana tsy fantatra dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona avy amin'ny fahazazany hatramin'ny fahazazany.
Ryan Fraser Storyhood - Analysis. Bola ho EveningExpress, DailyRecord ary PremierLeague
Eny, samy mahafantatra an'i Fraser amin'ny mpihira Scottish taloha sy tanjona ny mpanampy azy. Na izany aza, afa-po amin'ny mpilalao baolina kitra vitsivitsy ihany no mihevitra ny Bio Fraser izay mahaliana. Ankehitriny tsy misy ado, alefaso.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Ryan Fraser dia teraka tamin'ny andro 24T febroary 1994 ho an'ny reniny, Debbie Fraser sy ny rainy, Graeme Fraser tao an-tanànan'i Aberdeen renivohitra, avaratra atsinanan'i Scotland, Royaume-Uni. Ny Scott izay fotsy sy firazanana izay fotsy dia teraka ho hany tokana amin'ny ray aman-dreniny.
Ryan Fraser dia avy amin'ny fianakaviana iray manetry tena, ambony ambony ary an-dakilasy. Nahoana no Sporting Home? ... Izany dia satria ny reniny dia mpilomano 100 teo aloha izay nisolo tena an'i Scotland tamin'ny hetsika atletika.
Ryan Fraser dia nandany ny taonan'ny fiainany tany Aberdeen, Scotland alohan'ny nifindrany tamin'ireo ray aman-dreniny tany Oman, firenena Afovoany Atsinanana izay nahazoan'ny dadany asa ho mpiasa an-dranomasina, TheScottishSun tatitra. Ny raim-pianakavian'i Ryan Graeme Fraser tamin'ny fandrafetana ny asa-menaka atsinanana atsinanana dia nanapa-kevitra ny hamindra ny fianakaviany manontolo.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fanabeazana sy fanabeazana
Ahoana no nanombohana ny lalao baolina kitra?
Raha mbola niaina tany Oman niaraka tamin'ny ray aman-dreniny i Ryan Fraser, nanana baolina izy ary ny zavatra rehetra nataony dia ny baolina. Tsy dia fantany fa nanangana talenta izy. Ryan didnâ € ™ taka fotsiny ny baoliny, dia nianatra ny fomba handehanana miaraka aminy. Izany no fotoana farafaharatsiny nipoiran'ny fototarazon'ny reniny tamin'ny fanatanjahantena na ny fitiavan'ny ray aman-dreniny tamin'ny voalohany.
Raha niresaka momba ny endriky ny endrik'i Fraser indray mandeha dia miresaka momba ny fahatanorany; â € œNy reniko sy ny dadako dia tsy tia baolina kitra, noho izany dia tsy fantatro hoe ahoana no nahatongavako tao. "Azo inoana fa nahita ny zanany lahy izy ireo tamin'ny fanatanjahan-tena izay tsy nahaliana azy fotsiny, fa ny fanapahan-kevitra farany hiverina any amin'ny tanindrazany.
Ny sorona nataon'ny Ray:
Rehefa hitan'ny rain-dalan'i Ryan Fraser fa tsara tamin'ny baolina ny zanany lahy dia nanapa-kevitra ny handao ny asany goavam-be izy amin'ny anaran'i Aledey. Young Fraser dia 10 tamin'izany fotoana izany ny fianakaviany nanapa-kevitra ny hanampy azy hanohy hanonofy ho lasa mpilalao baolina.
Na dia mafy ho an'i Graeme aza ny nandao ny asany ary i Debbie hiatrika ny fisotroan-dronono avy amin'ny atleta, dia nanapa-kevitra ny hanohy hiaina ny nofinofiny amin'ny zanany lahy ireo ray aman-dreny be fitiavana.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Ny fanapahan-kevitry ny fianakavian'i Ryan Fraser dia nandoa ny dividends tamin'izy ireo nahita ry Ryan kely nofinidy tamin'ireo ankizy nahomby izay nandalo fitsapana tamin'ny akademia sakaizan'ny Kincorth tany Aberdeen, Ecosse.
Ny fametrahana adihevitra ho an'ny akademia malaza dia lavaka lava, iray izay tena nilavo lefona. Rehefa nitohy nitombo i Ryan, dia hitany fa niorina tsara tao amin'ny Akademia izy. Tany am-piandohana dia nanjary niharihary fa ny tanora Fraser dia nandova ny haingam-pamaky ny reniny. Fraser no kely indrindra sy ankizy kely indrindra tao amin'ny akademia.
Ryan Fraser, raha ny marina, dia niasa nandritra ny andro niasany. Credit to EveningExpress CO.UK
Ny fiainana ao Aberdeen FC:
Ryan Fraser dia nandao ny Kincorth Academy tamin'ny taona 16 taorian'ny sonia fifanarahana tamin'i Aberdeen FC. Raha mbola nitohy i Ryan Fraser, dia nahita ny tenany ho tsara fiaina miaraka amin'ny Akademia. Izy no nanao ny fandrosoana amin'ny alàlan'ny sokajin-taona ho an'ny akademia, ny fahatokisan'ny mpilalao tanora azy.
Ny taona 2010 dia nahita an'i Fraser nomena fahafahana hilalao ao amin'ny ekipa lehiben'ny ekipan'i Aberdeen izay mbola nanohy nanatontosa ny lalao. Fraser dia nanao fahatsapana avy hatrany tao amin'ny ekipa voalohany ekipan'i Aberdeen nandritra ny tapany am-piandohan'ny lanonana 2012-13 Scottish Premier League. Nahazo azy ny loka Young Player amin'ny volana ny volana septambra sy Oktobra 2012.
Ryan Fraser momba ny tantara taloha. Credit to Daily Record.
Ny fahombiazan'i Ryan Fraser dia nanjary loharanom-pahatezerana lalandava sy olana ho an'ireo mpilalao mpanohitra. Ny toe-javatra dia tsy afa-nanoatra ary avy eo i Aberdeen mpitantana Craig Brown dia tsy maintsy naneho ny ahiahiny fa ireo ekipa mpifanandrina dia mikendry an'i Fraser amin'ny henjana henjana.
Taorian'ireny fanamby ireny, nanapa-kevitra i Fraser fa handà ny fanitarana ny fifanarahana amin'ny fanantenana hanohy ny baolina kitra baolina any atsimo any Angletera. Ity fanapahan-kevitra ity dia nanohitra ireo mpankafy an'i Aberdeen izay niova hevitra.
Ady miala amin'ny fiainana any ACF Bournemouth:
Ny làlan'i Ryan momba ny tantaram-pianakaviana - rehefa mipaingotra ny mandeha. Credit to talkSPORT
Ny lozam-piarakodia lehibe nipoitra teo amin'ny sehatra fampiofanana voalohany dia nanakana ny fandrosoana voalohany nataon'i Fraser tao Bournemouth. Ny tena zava-dehibe kokoa tamin'i Ryan hitondra dia ny fanararaotana natao taminy sy ny fianakaviany tamin'ny mpankafy Aberdeen teo aloha izay tsy faly tamin'ny fialany.
Raha niresaka momba ny traikefa i Fraser dia niteny hoe: "Sarotra ny niatrika ny fanapahan-kevitry ny famindrana izay vao mainka niharatsy rehefa nidina aho ary naratra avy hatrany. Roa herinandro nanohy ny hetsika, nahatsapa aho fa nanao ny safidy tsara, saingy izaho sy ny fianakaviako dia nanosika azy io ". Fotoana fotoana i Ryan Fraser dia nandefa bitsika sy hafatra, izay tena nanevateva ary mendrika ny tsy nanaiky.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitsangàna amin'ny tantara
Na dia teo aza ny fanombohan-draharahany tany Bournemouth sy ny fanararaotam-pahefana nitohy nokapohina, dia resy lahatra foana i Fraser fa izy no niantso ny fanapahan-keviny hiverina lavitra any atsimo. Nanapa-kevitra ny hanao ny kabariny izy fa tsy hijery izay nolazain'ny mpankafy taloha momba azy sy ny fianakaviany. Araka ny voalazan'i Scott, â € œRaha mbola mihevitra ny olona sasany hoe fanapahan-kevitra diso aho, dia ampy tsara. "
Ny vanim-potoanan'ny ratra dia nanjary fotoana fisaonana lalina ho an'i Ryan Fraser izay niteny tamin'ny teniny, ...
Ryan Fraser Road mankany amin'ny fialantsasatra. Credit to AFC Bournemouth.
"Tamin'ny lozam-pifamoivoizana dia tsy nitana be loatra tamin'ny fizarana voalohany aho saingy nahatsapa ho toy ny mpilalao aho. Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny latina Tamin'izany fotoana izany dia nanomboka fantatro ny lalao tao anatiny. Nianatra aho hoe rahoviana no hanao zavatra, rehefa hiampita ny baolina, rehefa miditra ao anatiny, rehefa mijanona. "
Taorian 'ny ratra, dia tsy nanam-potoana akory i Ryan nanomboka nandroso teo amin' ny morontsiraka atsimo. Nahita azy izy Mankalaza fiderana be noho ny fampisehoana mampiavaka azy. Ryan Fraser dia nanampy ny ekipany handresy ny Champions League 2014 / 2015 Football League.
Ryan Fraser Road ho an'ny tantaram-pirenena
Toy ny tamin'ny fotoana nanoratana, Ryan dia niorina mafy tao amin'ny Ligy Premier teo ambanin'ny Eddie Howe. Ny fizaran-taona 2018 / 2019 dia nahita azy ho lasa mpanjaka mpanohana an'i Bournemouth. Tahaka ny tamin'ny fotoana nanoratana, Fraser noheverina fa mpanome fanampiana tsara indrindra aorian'izay Eden Hazard ary Christian Eriksen.
Ryan Fraser Fikirakira Taridalana ho an'ny Torolàlana
Androany, nahita izao tontolo izao fa nisy fanapahan-kevitra saro-pady sy feno fanakianana izay nitarika ho amin'ny fiakarana mahavariana ary koa nanenika ny fahombiazan'ny kliobany. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Iza moa ry Ryan Fraser Girlfriend na Wag?
Miakatra ny lazan'i Ryan Fraser, ny fanontaniana eo amin'ny molotra tsirairay dia ...Iza moa ny sipany Ryan Fraser na WAG?. Adinoy ny haavony, tsy misy ny mandà ny zava-misy fa manana toetra tsara i Ryan Fraser, miaraka amin'izany fomba fijery mahafinaritra izany izay mahatonga azy hanana karazam-bary ho an'ny vehivavy.
Na dia izany aza, araka ny tatitra an-tserasera marobe, dia hita fa toa mbola mpitovo ihany i Ryan Fraser toy ny tamin'ny fotoana nanoratana. Na dia izany aza, mieritreritra isika fa mety amin'ny fifandraisana izy, saingy aleony tsy mamela azy io am-pahibemaso amin'izao fotoana izao.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Fiainana manokana
Ny fahazoana mahafantatra ny fiainan'i Ryan Fraser dia hanampy anao hamorona sary iray manontolo momba azy. Miala amin'ny baolina kitra ry Ryan Fraser dia miaina fiainana mahazatra sy manetry tena.
Ryan Fraser Mitantara ny fiainan'ny tena manokana
Ankoatr'izany, amin'ny fiainany manokana, Ryan Fraser dia somary introvert. Tiany ny mijery tsara ny lala-masony amin'ny lalao ary, noho izany, dia misoroka ny adihevitra momba ny fiainany manokana amin'ny sehatra ampahibemaso. Mampalahelo izany ho an'ny haino aman-jery ny hisaintsaina betsaka momba azy.
Ryan Fraser Childhood Story Plus Untold Biography Facts- Mitantara ny fiainam-pianakaviana
Talohan'ny nidirany ho baolina kitra, ny fianakaviana Ryan Faser dia nanan-karena mba hahazoana $ 100,000 (Ny salan'isa isam-bolana isan-taona) isan-taona miaraka amin'ny tombotsoan'ny fisotroan-dronono ho an'ny mamanany. Na izany aza, talohan'ity lahatsoratra ity, tsy hita fa tsy ny mpianak'i Ryan Fraser rehetra no tia fanatanjahantena nanomboka teo.
Fantatrao ve?… Nandeha tamin'ny Lalao Olaimpika ny mofomamin'i Fraser, Debbie, saingy naratra tamin'ny lohaliny izy izay nifarana tamin'ny asany. Na dia efa ela aza i Debbie dia nisotro ronono avy amin'ny atletisma, dia nihazakazaka nihazakazaka ny zanany lahy superstar raha toa ka nanana fifandonana izy ireo. Niresaka momba izany i Ryan indray mandeha, ...
"Mihelina haingana noho ny ahy ny mamanay - haingana kokoa! Naratra izy tamin'io fotoana io, saingy nirotsaka an-dalambe izahay ary efa saika nokapohiny. Vitsy kely noho izy izy fa efa haingana! "
Na dia nanome toky tamim-panajana aza ny mamanany, dia ho feno fankasitrahana mandrakizay ho an'ny dadany i Fraser izay nanao io sorona goavam-be io ka nandao ny volany nanoloana ny asan'ny solika ho an'ny asany. Ny Graeme Fraser rehetra dia te-hahita ny zanany ho tia ny baolina kitra ary hifantoka amin'izany na dia amin'ny alalan'ny nofinofiny aza.
Ny Fraser toy ny tamin'ny fotoana nanoratana dia manana lanjan'ny vidin'ny £ 16.20m araka ny TransferMarket Report. Na izany aza, ity zava-misy ity dia tsy mihoatra ny an'ny Mahavariana ny fiainana mahavariana mora foana amin'ny fiara madinika, trano lehibe, tovovavy ary buzz. Ryan Fraser dia tia mandany ny famandrihana golf eny amin'ny banky.
Ryan Fraser indray dia nanampy ny Pizza sy Ice Cream, angamba noho ny olana momba ny fahasimbana teo aloha. Nandresy lahatra azy i Eddie Howe fa handao ny fahazarana Pizza sy Ice Cream amin'ny olon-kafa hanangana drafitra sakafo ara-pahasalamana bebe kokoa. Ny fihinanana sakafo mahasalama dia nahatonga azy tsy nahatohitra fanafihana mahery vaika sy fanararaotam-pahefana izay natolotry ny mpiaro.
Ny TV Show voalohany
Ryan Fraser dia anisan'ireo mpilalao baolina vitsivitsy izay nandray anjara tamin'ny fisehoan'ny fahitalavitra. Fantatrao ve?... Mpilalao sarimihetsika tamin'ny fampisehoana ara-panatanjahantena izyFootball on 5: The Championship".
Momba ny halavany:
Ryan Fraser - Ilay mpilalao malaza indrindra ao amin'ny Ligue Premier. Credit to DailyMail
Miaraka amin'ny 5ft 4ins XNUMXins, Fraser no mpilalao kely indrindra amin'ny haavon'ny teny Anglisy amin'izao fotoana izao amin'ny fotoana hanoratana. Na eo aza ny haavony, dia nanao dingan-dava goavana ny kintana bitika tamin'ny ligy voalohany.
MIEZAHA HAHAY: Misaotra tamin'ny famakiana ny tantaram-pitiavan'i Ryan Fraser momba ny tantaram-pianakaviana sy ny zava-misy tsy fantatra momba ny tantaram-piainana. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.